Muran u dhexeeyay Shaqaalaha iyo Cisbitaalka Deva oo xal laga gaaray – Radio Muqdisho
Muran u dhexeeyay Shaqaalaha iyo Cisbitaalka Deva oo xal laga gaaray
kulankan oo u jeedkiisu ahaa xal u helida muran soo dhex galay shaqaalaha iyo maamulka Cisbitaalka ay maamulaan Dhakhaatiir u dhashay dalka Turkiga ee Deva oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay guddoomiyaha guddiga xiriirka Barlamaanada Soomaaliya iyo Turkiga Xildhibaan C/qaadir Macalim Nuur, Saraakiil ka tirsan Boliiska Soomaaliya, Maamulka Hodan iyo Shaqaalaha iyo maamulka Cisbitaalka Deva.
Sababta keentay muranka ayaa la sheegay markii mid kamid ah Dhakhaatiirka ku dhashay Turkiga kana howlgala Cisbitaalka Deva gaar ahaan qeybta Farmashiyaha uu xilli habeenka is maan dhaafeen kadibna uu u gacan qaaday mid kamid ah gabdhaha Kaalkaaliyeyaasha ah oo Soomaali ah isla markaana kamid ah shaqaalaha Cisbitaalka Deva ee Muqdisho.
Dhamaan sahqaalaha Soomaalida ah oo ka howlgala Cisbtaalkaasi ayaa cabasho ay arintaas ka qabaan shaqo joojin sameeyay,maamulka Cisbitaalka ayaa go’aamiyay in ninkii gabadha u gacan qaaday shaqada laga joojiyo,hase yeeshee gabadhii loo gacan qaaday ayaa cafisay sidaas ayaana maanta lagu xaliyay murankaasi sida gudoomiyaha degmada Hodan C/qaadir Cali Kulane ayaa saxaafadda u sheegay isagoo kamid ahaa mas’uuliyiintii kulanka ka qeybgashay.
Cisbtaalka Deva ee magaalada Muqdisho oo howlihiisa shaqo ay hakad ku yimid ayaa maanta dib howlihiisa u bilaabay kadib markii xal loo helay khilaafkii sababay shaqada Cisbitalka ay istaagto.
Guddoomiyaha guddiga xiriirka Barlamaanada Soomaaliya iyo Turkiga Xildhibaan C/qaadir Macalim Nuur ugu dambeyntii kulankaasi ka hadlay ayaa shaqaalaha Cisbitaalka Deva kula dardaarmay in ay shaqadooda sii wadaan isla markaana ka shaqeeyaan xoojinta xiriirka walaaltinimada ku dhisan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
Waa markii ugu horeysay oo muran noocaan uu soo shaac baxo kaas oo u dhexeeya shaqaalaha Soomaalida iyo kuwo Turkiga ee shaqooyinka kala duwan ka hayo magaalada Muqdisho, xilli caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ay ku yaalaan Cisbitaalo,goobo waxbarasho iyo goobo kale oo muhiim ah oo ay gacanta ku hayaan muwaadiniin u dhashay Turkiga isla markaana ay ka shaqeeyaan boqolaal shaqaale Soomaali ah.
R.W Sharma’arke: “Si adag ayaan u cambaareynayaa weerarka dareen la’aanta ah ee lala beegsaday Xerada AMISOM”